Su'aalaha La Weydiiyo | Songz Gawaarida Hawada Co., Ltd.
1. Marka laga reebo badeecadaha ku taxan bogga, ma jiraan waxyaabo kale oo hawo qaboojiye ah oo laga heli karo SONGZ?
Haa, waxaan haynaa badeecooyin la heli karo sidoo kale qaboojiye hawo-qaboojiye iyo qaboojiyaha baarkinka korontada, fadlan la xiriir sales@shsongz.com wixii faahfaahin dheeraad ah.
2. Goorma ayay SONGZ bilawday R&D ee qaboojiyaha baska korontada ku shaqeeya?
Waxaan bilownay R&D kahor 2009, iyo 2010 sanadkii ugu horeeyay waxaan suuq geynay 3250 unug. Intaa ka dib, tirada iibku way sii kordheysaa sanadba sanadka ka dambeeya waxayna garaaceysaa dusha sare ee 28737 ee 2019.
3. Waa maxay maaddada SMC?
Waxyaabaha isku dhafan ee loo yaqaan 'SMC (Computing Mounding Compound') waxaa lagu mideeyaa heerkul sare oo hal mar la duubo, oo leh awood farsamo sare leh, maaddada miisaanka fudud, caabbinta daxalka, nolosha adeegga muddada dheer, xoogga dahaadhka qaansada, caabbinta, ololka, waxqabadka suumanka wanaagsan, iyo wax soo saarka dabacsan Naqshadeynta, fududaanta waxsoosaarka waxsoosaarka, Waxayna leedahay faa'iidooyinka badbaadada iyo quruxda, oo leh waxqabadyo ilaalin cimilada oo dhan, oo buuxin kara baahiyaha deegaanno kala duwan oo adag iyo mashaariic injineernimada banaanka ah.
SONGZ waxay korsatay maaddada 'SMC' ee daboolka qaboojiyaha baska ee taxanaha SZR iyo SZQ, si ay u buuxiso booska daboolka muraayadda fiber-ka.
Isbarbardhiga u dhexeeya SMC & Fiber galaaska Daboolka
Waxyaabaha la Isbarbar dhigo
SMC Wax ku shubid
Nooca nidaamka Nidaamka samaynta alaabada isku dhafan badanaa hawlgalka gacanta ee heerkulka sare iyo cadaadiska. Nidaamku waa sahlan yahay, hawlgalku waa ku habboon yahay, looma baahna qalab xirfad leh, laakiin tayada qaybaha waa adag tahay in la damaanad qaado Wax-ku-xoqidda isku-xoqidda waa hawlgalinta gelinta isku-darka wax-u-ekaanta SMC-da ee godka caaryada ee heer kulka wax lagu qalo, ka dibna xiraya caaryada si loo cadaadiyo loona qaabeeyo loona adkeeyo. Wax taaj oo kale riixitaanka waxaa loo isticmaali karaa balaastikada heerkulbeegga iyo thermoplastics.
Sahlanaanta dusha sare ee badeecada Si siman hal dhinac ah, oo tayada ku xiran tahay heerka hawlgalka shaqaalaha Labada dhinacba mid jilicsan, tayo wanaagsan
Qallooca alaabta Badeecadu waxay leedahay qaddar badan oo isbeddel ah mana fududa in la xakameeyo. Waxaa si weyn u saameeya heerkulka iyo hawlgalka gacanta Qaloocsanaanta alaabtu waa yar tahay, oo xiriir yar ayey la leedahay heerkulka iyo heerka shaqaalaha
Xumbada Nidaamka wax u sameynta awgood, dhumucda waxaa go'aaminaya tirada lakabyada lakabmay, lakabyadu ma sahlana in la dhex galo, goobooyinku ma fududa in laga saaro, goobooyinkuna way fududahay in la soo saaro Dhumucda waxaa lagu go'aamiyaa qadarka quudinta iyo caaryada. Sababtoo ah heerkulka sare iyo wax ka beddelidda cadaadiska sarreeya, ma sahlana in la soo saaro goobooyin
Dildilaac 1. Qaddarka badan ee cillad soo-saarka awgeed, ma sahlana in la xakameeyo, mana fududa in la rakibo inta lagu jiro rakibidda.2. Heerkulka hoose ee lagu daaweeyo wax soo saarka tartiib-tartiib ah, taasoo keenta dildilaacyo yaryar oo dusha alaabta ah
3. Adkaanta badeecada oo yaraatay awgeed, dabacsanaanta ayaa ka weyn tan wax taaj oo kale, rinjiga dushiisuna wuxuu u nugul yahay khadadka ganaaxa ee alaabada
Shayga waa xasilloon yahay, illaa xoogga maxalliga ahi aanu ku filnayn, diirada diiqaddu waxay keenaysaa dildilaac
Soo saar Maalgashiga bilowgu wuu hooseeyaa, waxsoosaarkuna wuu hooseeyaa, kumana haboona dufcado. Soosaarka waxaa si weyn u saameeya tirada shaqaalaha iyo tirada wasakhahaasi (3-4 gogo '/ caaryo / 8 saacadood) Maalgashi bilow ah oo ballaadhan, oo ku habboon wax soo saar ballaaran (180-200 xabbadood / caaryo / 24 saac)
4. Waa maxay waxyaabaha LFT?
LFT waxaa sidoo kale loo yaqaan 'thermoplastic-fiber-ku-xoojin-dheer ama caadiyan loo yaqaan' fiber-fiber-solidled thermoplastic material composite ', oo inta badan ka kooban PP iyo fiber iyo waxyaabo lagu daro. Isticmaalka lagu daro waxyaabo kala duwan ayaa beddeli kara oo saameyn ku yeelan kara astaamaha farsamooyinka iyo codsiyada gaarka ah ee sheyga. Dhererka fiber wuxuu guud ahaan ka weyn yahay 2mm. Tikniyoolajiyadda farsameynta hadda waxay durbaba sii wadi kartaa dhererka fiberka ku jira LFT ee ka sarreeya 5mm Isticmaalka fiilooyinka kala duwan ee miraha kala duwan waxay ku guuleysan kartaa natiijooyin wanaagsan. Iyada oo ku xidhan isticmaalka dhamaadka, badeecada la dhammeeyay waxay noqon kartaa mid dhaadheer ama qaab-qaabeed ah, ballac gaar ah oo saxan ah, ama xitaa bar, oo si toos ah loogu isticmaalo beddelka alaabada heerkulka.
5.Faa'iidooyinka LFT marka la barbar dhigo faybar gaagaaban oo la xoojiyay iskudhafyo heerkulbeeg leh
Dhererka dhererka dhererka dheer wuxuu si weyn u hagaajinayaa sifooyinka farsamada ee sheyga.
Qalafsanaan gaar ah oo gaar ah iyo xoog gaar ah, caabbinta saamaynta wanaagsan, gaar ahaan ku habboon codsiga qaybaha baabuurta.
Cadaadiska gurguurta waa la hagaajiyay. Xasiloonida cabbirku waa wanaagsan yahay. Iyo qaabka saxda ah ee qaybaha waa mid sareeya.
Adkaysi daal badan
Waxay ka xasilloon tahay heerkulka sare iyo jawiga qoyan.
Inta lagu jiro howsha wax-sameynta, fiilooyinka ayaa u dhaqaaqi kara xoogaa ahaan qaab-sameynta, dhaawaca fiber-ka ayaa yar.
Qalabka LFT waxaa loo qaatay qaboojiyaha baska ee taxanaha SZR, taxanaha SZQ, iyo nooca cidhiidhiga ah ee taxanaha SZG.